YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, December 02
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/02/20090အကြံပြုခြင်း
ရန်ကုန်မြို့ အတွက် အလှည့်ကျလျှပ်စစ်ပေးရေးအစီအစဉ်
Yangon EPC Timetable
လာမဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက် နေ့ဆို ၊ မေမြို့ ဒီအက်အေ ကျောင်းဆင်းပွဲ ရှိပါတယ်။နောက်ထပ် တပါတ် ၁၈ ရက် နေ့ မှာ စစ်အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းဆင်းပွဲ ပါ။နောက်ထပ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ မှာ စစ် ဆေးတက်ကသိုလ် တွေ ကျောင်းဆင်းမှာပါ။အားလုံး လူ ၇ဝဝဝ ကျော် လောက် ဗိုလ်ကလေးတွေ ဖြစ်ကြဦးမှာပါ။
နိုင်ငံတော်ကြီး တွေလဲ ကျောင်းဆင်းပွဲ တွေ လိုက်တက် နေကြရလို့ ဒီ တလ တော့အားကြမယ် မထင်ပါ။ အခု နှစ် ဒီအက်အေ က တော့ ဆင်းတဲ့ ကျောင်းဆင်းထဲဒီ နှစ် က လူ အများဆုံးပါ တဲ့ ခင်ဗျ ။ လူပေါင်း ၃၇ဝဝ ကျော် ဆင်းပါမယ်။
ဘယ်လောက် များ သလဲ ဆိုရင် ၊ အရင် အသုတ်တွေ တုံး က ၊ ဗိုလ်လောင်း ၁ ယောက် ကိုမိဘ ၂ ဦး နဲ့ ဧည့်သည် ၂ ဦး ပွဲတက်ခွင့် ရှိပါတယ်။ နောက် တော့ မိဘ ၂ ပါးဘဲ တက်ရပါတယ် ၊ နောက် တော့ နေရာ မဆန့် လို့ မိဘ ၁ ဦး ဘဲ တက် ရ ပါတော့တယ်။
ဒီ နှစ် များ က တော့ ၊ ကျောင်းဆင်းမဲ့ ကျောင်းသား အတွက်တောင် ထိုင်စရာ နေရာ မရှိတော့လို့ ၊ ဘယ် မိဘ မှ ဘွဲ့ပေးတဲ့ အခန်းထဲ ပေး မဝင်တော့ ပါဘူး၊ အပြင် က ဘဲ အားပေးကြရမယ် ဆိုပီး သိ ရ ပါ တယ် ။ စတိုင် တမျိုး ပေါ့ဗျာ ။
ဒီအက်အေ က လည်း စဖွင့်ခါ စ က ကျောင်းသား ၁ဝဝ တောင် မရှိပါဘူး ၊နှစ်အလိုက် တိုးပြီးခေါ်လိုက်တာ ၊ အခု နှစ် ဆင်းတာ က စံချိန် ပါဘဲတဲ့ ဗျ ။အရင် က ဆယ်တန်း အောင်ပြီး တက်ရ တဲ့ ဒီအက်အေ နဲ့ ဘွဲ့ ရ ပြီး မှ သင်တန်း တက်ရတဲ့ အိုတီအက်စ် ဆိုပြီး ဗိုလ် သင်တန်း ၂ မျိုး ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ အခုတော့ အပြင်လူဘွဲ့ ရ တွေ ကို ဗိုလ် သင်တန်းခေါ်တဲ့ အိုတီအက် က မရှိတော့ ပါဘူး ခင်ဗျ။
အဲဒီ သင်တန်းဆင်း အချင်းချင်း က သိပ် မတည့်ကြပါဘူး ၊ ဒီအက်အေ က အိုတီအက် ကိုအထင်မကြီး သလို ၊ အိုတီအက် က လည်း ဒီ အက် အေ ကို ကြည့် မရပါဘူး။ဒီအက်အေ ဆင်း ကို ဒေါ်စိန်အေး ရဲ့ သားတွေ လို့ နာမည်ပေးထားသလိုအိုတီအက် ဆင်းတဲ့ ဗိုလ်တွေ ကိုတော့ ဦးတင်စိုး ရဲ့ သားတွေ လို့ ကွယ်ရာမှာနာမည်ပြောင် ခေါ်ကြပါတယ်။
အခု စစ်တပ်ထဲ မှာ က ဗိုလ် ၁ဝဝ ကို ရဲဘော် က ၁ ယောက် နှုန်း ကိန်း ဆိုက်နေပါတယ်။စစ်သား က သာ မရှိ တာ ၊ ဗိုလ်တွေ က တော့ အပြည့်ပါဘဲ။ ဒီ ရှိတဲ့ စစ်သား ၁ ယောက်က လဲ နေ့စဉ် သူ ၁ ယောက်ထဲ တိုက် နေရတာတော့ ၊ ကြာတော့ ထွက်ပြေး ကုန်ကြတာများပါတယ် ၊ နေ့စဉ် တိုက် ရတယ် ဆိုတာ က စစ် တိုက် ရတာ မဟုတ်ပါ။ဟို ဗိုလ် က ဖိနပ် တိုက် ခိုင်း ၊ ဒီ ဗိုလ် က တံဆိပ် တိုက် ခိုင်း ၊ မီးပူတိုက်ခိုင်း၊အိုး တိုက် ခိုင်း ၊ ကြမ်း တိုက် ခိုင်း နဲ့ လက် ကို မလည် ရ ရှာပါဘူး။
နောက်နှစ်တွေ ကို တော့ ဗိုလ် ဦးရေ တွေ ၊ သိပ် မခေါ်တော့ဘူး လို့ ကြားပါတယ်။ကျောင်း မှာ ထားစရာ နေ ရာ သိပ် မကျန်တာ ရယ် ၊ ခန့် စရာ ရာထူး သိပ် မကျန်တော့တာရယ်ကြောင့် ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ် ၊ ၂ဝ၁ဝ အစိုးရ က တော့သူ တို့ ကို ၊ ဘယ်လို သဘော ထား မယ် မသိဘူး။
အင်း ၊ ၂ဝ၁ဝ အစိုးရ လို့ သာ ပြောရတယ် ၊ အခု ၂ဝဝ၉ ဘဲ ကုန်တော့မယ်။ဒီ လ ထဲ နိုင်ငံတော်ကြီး တွေ ၊ ခု န ပြောတဲ့ အလုပ် တွေ နဲ့ ၊ မအားသေး တာ နဲ့ ဆို ၊ဒီလ ထဲ မှာ ၊ ဘာ မှ ထူးထူး ခြားခြား ကြား ရ ဦး မယ် ၊ မ ထင် သေး ပါ ဗျာ ။စိတ် တွေ မ လောကြပါနဲ့ ခင်ဗျာ ၊ ဆန္ဒတွေ မ စော ကြ ပါနဲ့ဦး ခင်ဗျာ ၊ဒီ နေ့ က မှ ၁၃၇၁ ခုနှစ် ၊ နတ်တော် လပြည့်ကျော် ၁ ရက် ရှိသေး တာ ပါ က လား ဗျ ။
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၂ဝ၁ဝ ဆို တာ က ၊ လို တော့ ၊ လို ပါသေးတယ် ၊ ထင် ပ ဗျား ။
2 DEC ဒိုင်ယာရီ
2 Dec 2009 Diary
NDF bulletin Nov
Bul No.04- Nov, 2009 (2)
၈၈၈၈ ပြည့်သူ့ သတင်းစဉ် ။အတွဲ ၄ ၊အမှတ် ၅ ၊၂၀၀၉
8888 People Power December 2
အောင်မင်း... ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမြို့ဘက်ကို ခရီးသွားရင်းနဲ့ တစ်ခရီးတည်းသွား မိတ်ဆွေတစ်ဦးနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး သူ့ရဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုကို ရင်ဖွင့်သွားခဲ့ပါတယ်.....
သူတို့နေထိုင်တဲ့ရှမ်းမြောက်မြို့တစ်မြို့မှာ... မှတ်ပုံတင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ လ၀ကအမှုထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ကိုင်နေကြပုံကို စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်...
သူ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်.. သူက နိုင်ငံသားဖြစ်လို့ နိုင်ကဒ်ရထားသူပါ.. ဒါပေမယ့် သူ့ဇနီးက နိုင်ငံသားမဟုတ်လို့ ဧည့်ပေါ့နော်... သူ့သားသမီးတွေ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားတဲ့အချိန်မှာ အရမ်းအခက်အခဲတွေ့နေရတယ်ဆိုပါတယ်... စလုပ်ဖို့မှတ်ပုံတင်ရုံး(မြို့နယ်. လ၀က)ကိုသွားတော့ တစ်ဦးကို မြန်မာငွေတစ်သိန်းခွဲစီပေးရမယ်ဆိုလို့ တစ်ဦးကို ကျပ်တစ်သိန်းခွဲနှုန်းနဲ့ သားနဲ့သမီးနှစ်ဦးအတွက် ငွေကျပ်(၃)သိန်းကို ချက်ချင်းထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့၊ (၆)လကနေ တစ်နှစ်နီးပါးကြာလာလို့ဘာမှ မထူးခြားသေးလို့ လ၀ကရုံးကို သွားမေးတော့ လုပ်ထားပါတယ်.. ဒီလို နိုင်နဲ့ ဧည့် ရဲ့ ကလေးတွေကိစွက ကြာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ရုံးချုပ်အထိ တင်ရကြောင်း နားရှုပ်သွားအောင် ရှင်းလင်းပြောပြလိုက်ပါသတဲ့...။ ဟုတ်မှာဘဲဆိုပြီး နေလိုက်ပြန်ရော့.. တစ်နှစ်ကျော်လာလို့ နောက်တစ်ကြိမ် သွားမေးပြန်တော့ လက်မှတ်ထိုးမယ့်လူကြီးက မရှိလို့.. အဲဒီကို လက်မှတ်သွားထိုးရမှာမို့ လမ်းစရိတ်လိုကြောင်းပြောလို့တစ်ဖန် လမ်းစရိတ်အဖြစ် သောင်းဂဏန်းအထိ ပေးလိုက်ရပြန်တယ်ဆိုပါတယ်..။ တောင်းသမျှပေးပြီး ရမလာတော့ ဘယ်သူမဆို စိတ်ထဲမှာ ခံစားကြည့်ပေါ့နော်..။ သွားမေးပြန်ရင်လည်း ဟိုလွှဲ ဒီလွဲနဲ့ .. တာဝန်ရှိတဲ့ အတော်အသင့်ရာထူးကြီးတဲ့(လ၀က)သွားမေးမြန်းစုံစမ်းပြန်တော့ ထူးခြားမလာပါဘူးတဲ့ဗျာ...။ သူ့ခမျာ ဘယ်လို ဆက်လုပ်ရမှန်း မသိတော့ဘူးတဲ့.. အထက်ဌာနကို တိုင်ပြန်တော့ကော ထူးခြားမလာရင် အခက်တွေ့မယ်ဆိုပြီး.. ကြောက်နေရပြန်ပါသတဲ့ဗျာ...။
သိရသလောက်တော့ အဲဒီရှမ်းမြောက်မြို့တွေမှာ လ၀က အမှုထမ်းတွေ တော်တော်ကြီးပွါးနေတယ်ဆိုတာသိရတယ်ဗျာ... ၊ ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်. ဟိုတစ်နှစ်က ခရီးသွားရင်း လ၀က အမှုထမ်း(အောက်ခြေအဆင့်)တစ်ဦးနဲ့ တွေ့တော့... တော်တော်ထောနေပုံဘဲ လက်ထဲမှာ ဟန်းဖုန်းနဲ့.. လမ်းခရီးမှာ ကားနားပြန်တော့ .. ဘီယာဗူးနဲ့... လက်ထဲမှာ စီးကရက်နဲ့... အတော်ဟန်ကျ ပန်ကျပဲဗျာ...။ တစ်ဘက်က မျက်ရည်ကျ တစ်ဘက်မှာ ဟန်ကျ ပန်ကျ ပေါ့နော်.။။။။။။။။။